အချစ်နယ်ကျွံ (အသက် ၁၈နူစ်အောက်များ လုံးဝ မဖတ်ရူကြရန်): သင်းသင်း
ပထွေးဖြစ်သူ ဦးအုန်းကျော်၏ အလိုးခံခဲ့ရပုံများကို ပြန်လည် မြင်ယောင်မိလာလေတော့သည်..။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက သင်းသင်းအမေက ရွာမှာ အလှူလုပ်လိုသည်ဆိုသဖြင့် အိမ်ကို ပြန်သွားခဲ့သည်..။ အလှူကို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လုပ်မည်ဖြစ်သဖြင့် အမေက ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားပြီး စီမံ ခန့်ခွဲနေရသည်..။ သင်းသင်း အိမ်ကိုရောက်သွားတော့ မနက်ပိုင်း ဖြစ်သည်..။ ရေမိုးချိုး ၊ ထမင်းစားပြီးတော့ ခရီးပန်းလာသဖြင့် မိမိ အိပ်ခန်းထဲဝင်ပြီး ခဏလှဲနေလိုက်သည်..။ ခရီးပန်းလာတာရော ၊ ထမင်းစားပြီးခါစမို့ရောကြောင့် သင်းသင်းမှာ မှေးခနဲ အိပ်ပျော်သွားမိရသည်..။ အဲဒီမှာတင် သင်းသင်းတစ်ယောက် အိပ်မက်ဆိုးးတွေ မက်ပြီး ဘီလူးစီးတာ ခံလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်..။
သင်းသင်းအမေ ဒေါ်ပိန်သေး၏ နောက်ယောက်ျားဖြစ်သူ ဦးအုန်းကျော်သည် အရက်မှ လွဲ၍ မိန်းမ အပျော်အပါး ကင်းသူဖြစ်သည်..။ အရက်ကိုတောင်မှ တစ်ပါတ်တစ်ခါ နှစ်ခါသာ ပုံမှန်သောက်ဖြစ်သည်..။ သင်းသင်းကို မယားပါ သမီးဆိုပေမယ့် သမီးအရင်းလို ချစ်သည်..။ ဒေါ်ပိန်သေးနှင့် အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ချိန်တွင်ပင် ပထွေးနှင့် မယားပါသမီး တို့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်မည်ကို စိုးခဲ့သည်..။ သို့အတွက် ဒေါ်ပိန်သေးကို ရှင်းပြပြီး တစ်ဖက်လှည့်နှင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ နှင်းနှင်းအေးတို့အိမ်တွင် အနေခိုင်းလိုက်သည်..။
ဦးအုန်းကျော်အနေဖြင့် ဒေါ်ပိန်သေးကို ရခါစဖြစ်သဖြင့် အချိန်မရွေး လိုးမည်ဖြစ်သောကြောင့် သမီးပျိုးလေးသင်းသင်းအတွက် မတင့်တယ်ကြောင်း ဦးအုန်းကျော် နားလည်နေ၍ အိမ်မှာ မနေဖြစ်အောင် စီစဉ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်..။
ဦးအုန်းကျော်မှာ ဒေါ်ပိန်သေးကို ရခါစက ဒေါ်ပိန်သေးမှာ အမည်နှင့် မလိုက်အောင်ပင် တောင့်တောင့်တင်းတင်း ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုး ကြီး ဖြစ်သည်..။ သူနာပြုဆရာမလည်း ဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ လူနာရှိလျင် ရှိသလို အိမ်တွင် နေရချိန် နည်းသည်..။ သည်တော့ ဦးအုန်းကျော်မှာ ရသည့်အချိန်မှာ ရသလို ဒေါ်ပိန်သေးကို လိုးရသည်..။ မနက် ၊ နေ့ခင်း ၊ ည ဟူ၍ အချိန်ရွေးမနေအားပဲ တွေ့သည့်အချိန် ရသည့် နေရာမှာ လိုးသည်..။ အိမ်ထဲ ၊ အိမ်ပြင် ၊ မီးဖိုချောင် ၊ အိပ်ခန်း ထဲ စသဖြင့် ရသရွေ့ အချိန်မဆိုင်းပဲ လိုးလေ့ရှိသည်..။ ဒေါ်ပိန်သေးကလည်း မယ်မငြင်းဆိုသည့် မိန်းမမျိုးထဲက ဖြစ်သည်..။ ဦးအုန်းကျော် ဘယ်နေရာ ၊ ဘယ်အချိန် လိုးလိုး ၊ လိုးသမျှကို အမြဲတမ်း အသင့်ခံတတ်သည်..။ လိုးမယ်ဆိုလျင် အဆင်သင့်ပြင်ပြီး ခံလိုက်သည်ချည်း ဖြစ်သည်..။
လီးနှင့် ကင်းကွာပြတ်တောက်နေခဲ့ရသည်မှာ ကြာခဲ့ပြီကောလေ…၊ ဦးအုန်းကျော်ကလည်း အလိုးကောင်းဆိုတော့ ဒေါ်ပိန်သေး စွဲမယ်ဆိုလည်း စွဲလောက်စရာပါပဲ…။
သမီးဖြစ်သူက တက္ကသိုလ် ဆက်တက်တော့ သင်းသင်းအိမ်မှာ မရှိလေ ပိုပြီးလွတ်လပ်လေ ဖြစ်ပြီး ပိုးလိုးဖြစ်ခဲ့ကြသည်..။ အဲ…သင်းသင်း ကျောင်းပြီး၍ အလုပ်စဝင်တော့ မြို့ကျောင်းမှာ ပဲ တာဝန်ကျသည့်အတွက် အိမ်ပြန်ရောက်လာသောကြောင့် ဦးအုန်းကျော်မှာ ဒေါ်ပိန်သေးကို အလိုးလျှော့ထားရလေသည်..။ ညအိပ်မှပဲ လိုးဖြစ်တော့သည်..။
အလိုးမလျှော့လို့ မဖြစ်သည့် အကြောင်းကလည်း ပေါ်လာသေးသည်..။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဒေါ်ပိန်သေးတစ်ယောက် မီးယပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားလေသည်..။ တပိန်ပိန် တလိန်လိန်နှင့် ဖြစ်လာပြီးေ၇ာဂါကို သက်သာအောင်ပင် မနည်း ကုယူခဲ့ရသည်..။ လူနှင့် နာမည် အခုမှ လိုက်သွားရခြင်းလည်း ဖြစ်သည်..။ ဦးအုန်းကျော်မှာ ဒေါ်ပိန်သေးကို အရင်ကလို စိတ်ရှိတိုင်း မလိုးနိုင်တော့ အာသာပြေရုံလေးလောက်သာ လိုးရတော့သည်..။
ခုလည်း အလှူက ကျောင်းမှာပဲ လုပ်ဖြစ်သဖြင့် ကိစ္စတွေ စီစဉ်ရန် ဒေါ်ပိန်သေးနှင့် ကျောင်းမှာ အတူလိုက်သွားဖြစ်သည်..။ အဲ…ကျောင်းမှာ ရောက်တော့ အလှူပွဲမှာ ထည့်ရမည့် အချိုပွဲကိစ္စ မှာကြားရန် ပေါ်လာသည်..။ အချိုပွဲမှာရန် ကိစ္စက မြို့စွန်ကို သွားရမည်ဖြစ်ရာ ဒေါ်ပိန်သေးတစ်ယောက်တည်း ဆိုက်ကားဖြင့် သွားလိုက်သည်..။
ဦးအုန်းကျော်လည်း အိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့လိုက်သည်..။ စိတ်ထဲ နည်းနည်း ပန်းသလိုရှိသဖြင့် အရက်တစ်ပိုင်း ဝင်ကစ်လာခဲ့မိသည်…။ အိမ်ကိုရောက်တော့ တံခါးပွင့်နေသဖြင့် သင်းသင်းရောက်နေပြီဆိုတာ တွက်ဆလိုက်သည်..။ အရက်သောက်လာခဲ့သဖြင့် ဆီးသွားချင်သောကြောင့် အိမ်အတွင်းဖက်မှ တဆင့် နောက်ဖေးသွားရန် လာခဲ့သည်..။
ဦးအုန်းကျော်တို့လင်မယား အိပ်သော အိပ်ခန်းနှင့် သင်းသင်း၏ အိပ်ခန်းမှာ ကပ်လျက် ဖြစ်သည်..။ သင်းသင်းအိပ်ခန်းပြီးလျင် မီးဖိုခန်း ၊ ထိုမှတဆင့် အိမ်သာ ရေချိုးခန်း ရှိသည်..။ အိမ်ထဲဝင်ဝင်ချင်း ဆီးသွားချင်တာကို အရင် သွားပြီး ဖြေရှင်းလိုက်သည်..။ အိမ်သာမှ ပြန်လာချိန်တွင် သင်းသင်း၏ အိပ်ခန်းတံခါး မစေ့တစေ့ဖြင့် ဟနေသည်ကို တွေ့ရသည်..။ ဘာရယ် မဟုတ် ၊ အိပ်ခန်းတံခါးကို စေ့ပေးရန် လုပ်ရင်း အမှတ်တမဲ့ အိပ်ခန်းထဲ လှမ်းကြည့်မိသည်..။ သင်းသင်းမှာ အိပ်မောကျနေပုံ ရသည်..။ အိပ်နေပုံကလည်း ကြည့်ပါအုံး..။ ဒူးတစ်ဖက်ထောင် တစ်ဖက်လှဲ ပုံစံမျိုးဖြင့် အိပ်ပျော်နေသည့်အတွက် ခြေသလုံးအထိ လန်တက်နေသော ထမီအောက်မှ ဖွေးဥသော ပေါင်သားဝင်းဝင်းကြီးတွေကို တွေ့ရသည်..။ ထမီက လက်တစ်ဝါးသာသာလောက် ဟနေသဖြင့် အထဲကို တိုးလျှိုးပေါက် ကြီးတော့ မမြင်ရချေ..။ အရက်တစ်ပိုင်း ကစ်လာခဲ့သည့်အရှိန်ကြောင့်လည်း ဦးအုန်းကျော် စိတ်ထဲ နည်းနည်း ရဲတင်းမိသည်..။
သင်းသင်း၏ မလုံမလဲ အိပ်နေပုံကို ကြည့်၍ စိတ်၇ိုင်းတို့ ကြွလာကာ သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ကြီးကို မြင်ချင်လာသည်..။
သူ့အမေ ဒေါ်ပိန်သေး၏ စောက်ပတ်လိုပဲလား ၊ ဘာကွာခြားသလဲ သိချင်လာသည်..။ ဒေါ်ပိန်သေးကလည်း မြို့အစွန်ထိအောင် သွားရမှာဆိုတော့ အချိန် ကောင်းကောင်းရသေးသည်..။ သင်းသင်းကလည်း ခရီးပန်းလာလို့ထင့်..၊ အိပ်မောကျနေရှာသည်..။ အိမ်မှာကလည်း သင်းသင်းနှင့် သူ နှစ်ယောက်တည်း ဆိုသော အသိကလည်း ဦးအုန်းကျော်၏ စိတ်ဆင်ရိုင်းကို ချွန်းအုပ်၍ မရတော့ချေ..။ သင်းသင်း အခန်းထဲဝင်ပြီး အထဲမှ တံခါးကို ချက်ထိုးပိတ်လိုက်သည်..။ သင်းသင်းအိပ်နေသော ကုတင်အနီးသို့ အသာ တိုးကပ်သွားလိုက်သည်..။ သင်းသင်း၏ ထောင်ထားသော ဘယ်ဖက်ပေါင်အထက်တွင် ထမီစက ဒေါင့်တန်းဆွဲ တင်းနေသည်မို့ ထမီစ နှစ်ခုကြားတွင် လက်တစ်ဝါးစာလောက် ဟနေသည်..။
လှဲချထားသော ခြေတစ်ဖက်ဆီမှနေ၍ တဆင့်ကြည့်လိုက်ရာ မဲနက်နေသော စောက်မွှေးနုနုလေးများပေါက်နေသည့်ဆီးခုံလေးကို ထင်ရှားစွာ တွေ့လိုက်ရသည်..။
ဦးအုန်းကျော်မှာ တံတွေးကို လည်ချောင်းထဲ ဂလုခနဲ မြည်အောင် မျိုချလိုက်မိသည်..။ သင်းသင်းကို သမီးကဲ့သို့ သဘောထားခဲ့သောကြောင့် မသင့်တော်ဘူးဆိုတဲ့ အသိကလည်း ဝင်လာသည်..။ မကြံကောင်းမစည်ကောင်းသည်ကို တွေးမိပြီး စိတ်မိုက်ကို ထိန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားမိသည်..။ ကုတင်အနားမှ ပြန်၍ ခွာမည်ဟု ခြေလှမ်းပြင်သည်..။ ထိုစဉ်မှာပဲ သင်းသင်းက ကိုယ်ကို လူးလွန့်လိုက်ရာ လှဲချထားသော ခြေတစ်ဖက်ကို ထောင်လိုက်လေသည်..။ သည်တော့ ထမီက ပေါင်ရင်းအထိ လန်တက်သွားတော့သည်..။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းစလုံးမှာ ထောင်လျက်အနေအထား ဖြစ်သွားသဖြင့် ဝင်းစက်အိမွတ်သော ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးက ထင်းထင်းကြီး ပေါ်လာတော့သည်..။ ဖင်သားကြီးများကလည်း ဝင်းအိစွာ ပေါ်လာလေသည်..။ ပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာတော့ ရှုမငြီးနိုင်သည့် တောအုပ်မဲမဲလေးနှင့် တောင်ပူစာလေး က မြှူဆွယ်နေပေတော့သည်..။
စောက်မွှေးနုနုလေးများက ဆီးခုံပေါ်တွင် ထင်ရှားစွာ အုပ်မိုးလျက် စောက်ဖုတ်ကြီးက လက်လေးလုံးတင်းတင်းခန့် ဗျက်ကျယ်ပြီး အကွဲကြောင်းကြီးကလည်း နက်ရှိုင်းစွာ ချိုင့်ဝင်သွားပြီး နှုတ်ခမ်းသား ထူထူအမ်းအမ်းကြီးများကိုလည်း တွေ့လိုက်ရသည်..။
အပေါ်ဆီခုံအဆင်း အစပ်မှသည် အကွဲကြောင်းကြီးက ဖင်နှင့် တစ်ဆက်တည်း ဖြစ်အောင် ရှည်လျားလှသည်..။ စေ့ကပ်တင်းကြပ်နေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို သူ့လီးကြီး ထိုးသွင်းပစ်လိုစိတ်တွေက သူ့လီးတန်ကြီးကို ပုဆိုးထဲတွင် မာတင်းထောင်မတ်လာစေတော့သည်..။
စိတ်ရိုင်းဒီရေက တရိပ်ရိပ် တက်လာသောကြောင့် ပြန်လှည့်မည့် ခြေလှမ်းများကလည်း မရွှေ့နိုင်တော့..။
သင်းသင်းမှာလည်း ဘာတွေ အိပ်မက် မက်နေသည်မသိ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ပေါင်ခြံကြားကို လှမ်းကုတ်လိုက်ရင်း ထမီကို ခါးထက်သို့ ဆွဲတင်လိုက်ကာ ပေါင်ကြီးတွေ ကို ကားပစ်လိုက်တာ တွေ့လိုက်ရပြန်သည်..။ ပေါင်တန်ကြီးနှစ်ချောင်း ခပ်ပြဲပြဲကြီး ကားဟသွားသဖြင့် သင်းသင်းစောက်ပတ်ကြီးက ရှိရင်းစွဲအ၇ွယ်အစားထက် ပို၍ ပြန့်ကားသွားသည်..။ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းထိပ်မှ စောက်စိကလည်း ပြူးတစ်တစ်လေး ဖြစ်နေသည်..။
စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေး ဖြတ်ခနဲ ဟသွားရာ အတွင်းမှ နီရဲရဲ အသားနုလေးများကို မသိမသာလေး လှမ်းမြင်နေရသည်..။ ဦးအုန်းကျော် ကြည့်ရုံမျှနှင့် အားမရနိုင်တော့ချေ.။ ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်ကာ ကွင်းလုံးပုံချလိုက်ကာ ကုတင်ပေါ်သို့ လှမ်းတက်လိုက်မိတော့သည်..။
သင်းသင်း၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင် ဒူးထောက်လိုက်ပြီး အပေါ်မှ မိုးခွကာ လက်ထောက်လိုက်သည်..။ ဦးအုန်းကျော်၏ မာတင်းတောင့်ကာနေသော လီးတန်ကြီးက သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းကြီးပေါ် မေးတင်လို့နေပြီ..။ စောက်ပတ်နံ့ကို ရလိုက်သော လီးတန်ကြီးက တဆတ်ဆတ်ဖြင့် သူဝင်ရမည့် လမ်းကို ရှာဖွေနေပါသည်..။
ဘယ်လက်ကို ထောက်မြဲအတိုင်း ထားပြီး ညာဖက်လက်ဖြင့် လီးကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ကာ စောက်ပတ်အဝကို တေ့ထောက်လိုက်သည်..။ သင်းသင်း၏ ပေါင်တန်ကြီးများက ဆတ်ခနဲ တွန့်သွားသည်..။ ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီး ထိပ်ဝမှ အရည်ကြည်များ စီးထွက်ကျနေသော်လည်း သင်းသင်း ၏ စောက်ပတ်လေးမှာတော့ ခြောက်ကပ်နေသည်..။
လီးတန်ထိပ်မျက်နှာပြင်နှင့် သင်းသင်း၏ စောက်ပတ် အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် ပွတ်ဆွဲကြည့်လိုက်ရာ လီးကြီးမှ အရည်များက စောက်ပတ်မျက်နှာပြင် တစ်ခုလုံး စိုရွှဲ ပြောင်လက်သွားစေသည်..။ အပျိုစောက်ပတ်လေး၏ နူးညံ့မှု အထိအတွေ့က ဦးအုန်းကျော်ကို မိန်းမောသွားစေသည်..။ ဦးအုန်းကျော် ဘာမှ မစဉ်းစားချင်တော့…၊ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ပစေ မက်မောစရာကောင်းလွန်းလှသည့် ကာမအရသာကို ခံစားကြည့်လိုက်တော့မည်..ဟု စိတ်ထဲမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကာ လီးတန်ကြီးကို စောက်ပတ်အကွဲထဲသို့ ဖိသိပ်ထိုးသွင်းလိုက်တော့သည်..။
“ ဘယ်သူလဲ……ဟင်….အဖေ….ဘာလုပ်တာလဲ…..ဖယ်….ဖယ်…..ဖယ်ပါ…အု..အိ……………..” ဘယ်သူလဲ ဆိုပြီး မျက်လုံးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာ ဦးအုန်းကျော်၏ မျက်နှာကြီးကို မြင်လိုက်ရ၍ အော်လိုက်သည်..။ ဦးအုန်းကျော်က သင်းသင်း ပါးစပ်ကို လက်ဝါးတစ်ဖက်နှင့် ပိတ်လိုက်သည်..။
သင်းသင်းမှာ အော်လိုက်ပြီး စောက်ပတ်ထဲ လီးဒစ်ကြီး ဝင်နေခြင်းကို လွတ်လိုလွတ်ညား အတင်းရုန်းကန်လိုက်သည်..။ သို့ပေမယ့် ရုန်းကန်လေလေ လီးတန်ကြီးက ဒစ်ဖျားတင်မက စောက်ပတ်အတွင်း သို့ နစ်ဝင်လေလေ ဖြစ်နေသည်..။
“ သမီးရယ်…..အဖေ ….မနေနိုင်လို့ပါ…..သမီး စောက်ပတ်လေး က ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းလို့်ပါကွယ်…..”
ဦးအုန်းကျော်က သင်းသင်းကို ချော့မော့ပြီး ပြောပေမယ့် သင်းသင်းက မရချေ…။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို မြှောက်ပြီး ကုတင်နှင့် တဒုးံဒုံး ဆောင့်ချနေသည်..။ ဦးအုန်းကျော်၏ လက်မောင်းနှင့် ရင်ဘတ်များကို လည်း ထုရိုက်နေသည်..။
ဦးအုန်းကျော်မှာ အခြေအနေ သိပ်မကောင်းမှန်း သိလိုက်သည်..။ သူ၏ လီးတန်ကြီးကလည်း အစက ဒစ်ဝင်ရုံလောက် သွင်းထားသော်လည်း သင်းသင်း၏ ရုန်းကန်တွန့်လိမ်မှုကြောင့် စောက်ပတ်ထဲ တဝက်လောက် ဝင်နေပြီ ဖြစ်သည်..။
အပျိုစစ်စစ်လေး၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးတန်ကြီး သွင်းလျက် လိုးရသည့် အခွင့်အရေးဆိုတာကလည်း ရနိုင်ခဲသည့် အခွင့်အရေးလည်း ဖြစ်သည်..။ လီးတန်ကြီးက သင်းသင်းေ စာက်ပတ်ထဲ ဝင်နေသည့် အရသာက ချိုဆိမ့်နေအောင်လည်း ကောင်းနေသည် ဖြစ်သည်..။
ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုးကို နောက်မဆုတ်စတမ်း အရယူပြီး လိုးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်..။
“ အဖေ….မလုပ်ပါနဲ့….အဖေရယ်…..မကောင်းပါဘူး….သမီး အော်လိုက်မယ် နော်…..”
သင်းသင်း၏ ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားသော လက်ကို ဖယ်လိုက်သည်နှင့် သင်းသင်း၏ ဒေါသထွက်နေသော စကားသံတို့က ထွက်ပေါ်လာတော့သည်..။ ဦးအုန်းကျော် ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်တော့ချေ..။ သင်းသင်း၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲမပြီး ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်လိုက်သည်..။ သင်းသင်း၏ လက်နှစ်ဖက် ကိုလက်ကောက်ဝတ်မှ စုပြီး လက်တစ်ဖက်တည်းနှင့် ကိုင်လိုက်သည်..။
ခေါင်းအုံးဘေးတွင် တွေ့ရသည့် လက်ကိုင်ပုဝါစနှင့် သင်းသင်း၏ ပါးစပ်ထဲသို့ ထိုးထည့် ဆို့သိပ်လိုက်သည်..။
ပြီးမှ သင်းသင်း၏ လက်နှစ်ဖက်ကို စုကိုင်ထားရာမှ ခွဲထုတ်လိုက်ပြီး သင်းသင်းကိုယ်လုံးဘေးတွင် လက်များကို ဆန့်ချလျက် လက်ကောက်ဝတ်မှ နေ၍ လက်တစ်ဖက်စီဖြင့် ဖိကိုင်ထားလိုက်သည်..။ သင်းသင်းမှာ သူမ၏ ကိုယ်လုံးကိုသာ လှုပ်ရှားနိုင်တော့သည်..။ ကိုယ်လုံးကို လှုပ်တိုင်းလည်း လီးတန်ကြီးက မိမိစောက်ပတ်ထဲမှ ကျွတ်ထွက်မသွားသည့်အပြင် ပိုပြီး နစ်နစ်ဝင်သွားနေသဖြင့် မလှုပ်တော့ပဲ ငြိမ်နေလိုက်သည်..။
ဦးအုန်းကျော်မှာ သင်းသင်း ငြိမ်သွားသဖြင့် အကြိုက်တွေ့သွားရသည်..။ သင်းသင်း၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဦးအုန်းကျော်က ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်ထားသဖြင့် သင်းသင်း၏ ဖင်သားထွားထွားကြီးများမှာ ကုတင်ပေါ်မှ တစ်ထွာခန့် မြင့်တက်နေသည်..။ ဦးအုန်းကျော်က တဝက်ခန့် ဝင်နေသော လီးတန်ကြိးကို သင်းသင်း စောက်ပတ်လေးထဲ အဆုံးထိရောက်အောင် ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်..။
ပြီးလျင် လီးဒစ်ပေါ်အောင် ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး အဆုံးထိဝင်အောင် ပြန်ဆောင့်သွင်းသည်..။ သုံးလေးငါးချက် မျှ ဆောင့်လိုးလိုက်သောအခါတွင်မတော့ အပျိုမှေး ကွဲထွက်သဖြင့် ထွက်ပေါ်လာသော သွေးများနှင့် စောက်ရည်ကြည်များက စောက်ခေါင်းအတွင်းရောထွေး ထွက်လာသည်..။
လီးတန်ကြီးကို ဆောင့်လိုးလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက် လုပ်ရတာလည်း ချောချောချူချူ ဖြစ်လာသည်..။ စောက်ပတ်နှင့် လိး အဝင်အထွက် ကြောင့် အသံများ ကလည်း ထွက်ပေါ်နေသည်..။အင့်…….အင့်…ဟင်.ဟင်………အင့်……ဟင့်……….”
သင်းသင်း၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ စောက်ရည်ကြည်များကလည်း အရမ်းထွက်လာပြီ ဖြစ်သည်..။ သွေးနှင့် စောက်ရည်ကြည်များ ရောနှောထွက်လာနေသော သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်လေးကို လိုးနေရသည့် အတွက် ဦးအုန်းကျော်မှာ အရသာ ရှိလာပြီ ဖြစ်သည်..။
သည်တော့ ဦးအုန်းကျော်၏ ဆောင့်လိုးချက်တွေက စိပ်စိပ်လာသည်..။ ဦးအုန်းကျော်မှာ ပါးစပ်ကြိးကို ဟလျက် အရသာခံစားရင်း ခပ်စိပ်စိပ်လေး လိုးဆောင့်နေလေသည်..။
ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်မာမာကြီးဖြင့် တအား ဆောင့်လိုးသဖြင့် သင်းသင်းမှာ စောက်ပတ်ထဲတွင် ပထမပိုင်း နာကျင်မှု ဝေဒနာကို ခံစားရသည်..။ ပထွေးက မယားပါသမီးကို စော်ကားရက်လေခြင်း ဟူသော အသိကလည်း သင်းသင်း၏ ရင်ကို နာကျည်းချက်တို့ ဖြစ်ပေါ်စေသည်..။
သို့သော်လည်း သင်းသင်း ၏ စောက်ပတ်လေးထဲသို့ ဦးအုန်းကျော်က ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း လီးတန်ကြီးက စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများကို ပွတ်တိုက်တိုးဝင်လာသည်..။
လီးတန်ကြီး တိုးဝင်လျင် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများက လိုက်ဝင်ပြီး လီးတန်ကြိး ဆွဲထုတ်လာလျင် စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများက ကျွံထွက်လာသည်..။ သည်တော့ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများသည် လီးတန်ကြီ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် လုပ်လေတိုင်း ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ကောင်းမွန်သော အရသာကို ပေးလာကြောင်း သိလာရသည်..။
သဘာဝတရား၏ စေ့ဆော်မှုကြောင့်လည်း စောက်ပတ်ထဲ တိုးဝင်လာသော ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီးကို စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများနှင့် ညှစ်ပေးတတ်လာသည်..။ လီးတန်ကြီး ဝင်လိုက်သည်နှင့် အံကျဖြစ်အောင် လည်း ဖင်ကြီးကို ကော့တင်ပေးလိုက်မိသည်..။
အစပိုင်းတွင် သင်းသင်းမှာ ဦးအုန်းကျော်၏ လိုးဆောင့်မှုများကို မကြည်မသာ ၊ နာကျင်မှုဖြင့် ခံနေရသမျှတို့က နောက်ပိုင်းတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော ကာမအရသာကို ပေးမှန်း သိလာရသည်..။
ဦးအုန်းကျော်၏ အလိုးအဆောင့် အညှောင့်နှင့် လိုက်လျော ညီထွေ ဖြစ်အောင် စောက်ပတ်ကို ညှစ်ပေးရင်း ဖင်ကြီးကိုလည်း ကော့ကော့တင်ကာ ကာမအရသာကို သငိးသင်း ခံစားနေလေတော့သည်..။
ဦးအုန်းကျော်မှာ အပျိုစစ်စစ်လေးဖြစ်သော သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်လေးကို အားရပါးရ လိုးနေရသဖြင့် တစ်ခါမှ မခံစားဖူးသော ကာမအရသာကို ခံစားနေရလေသည်..။ ကာမအရသာကို ဆက်ပြီး ခံစားလိုသဖြင့် အဆက်မပြတ် ပင် ဆက်တိုက် ဆက်တိုက်လိုလို သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်လေးထဲသို့ ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီးကို တအားဆောင့်လိုးနေလေသည်..။
မကြာခင်မှာပင် ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီး ဆိမ့်ကျင်လာရပြီး ပူနွေးပျစ်ချွဲသော သုတ်ရည်များကို လီးတန်ကြီးထိပ်မှနေ၍ သင်းသင်း၏ စောက်ခေါင်းဝထဲသို့ အပြည့်အလျှံ ပန်းသွင်းလိုက်လေတော့သည်..။
သင်းသင်းမှာလည်း ကောင်းမွန်လှသောကာမအရသာကို ခံစားလိုက်ရပြီး စောက်ခေါင်းထဲမှ သုတ်ရည်များကို ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီး ထိပ်ဆီသို့ ပန်းထုတ်လိုက်လေသည်..။
သင်းသင်း၏ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ကိုင်ရိုက်ထားသလို ဖြစ်ကာ ဘာမှ လှုပ်ရှားချင်စိတ် မရှိတော့ပဲ အားကုန်သလို ဖြစ်သွားရလေသည်..။ ဦးအုန်းကျော်မှာ လီးတန်ကြီးကို တပ်လျက်သား တန်းလန်းထားပြီး အပျိုစောက်ပတ်လေးထဲ လီးတန်ကြီး ထည့်ထားရသော ထူးခြားသည့် ကာမအရသာကို ခံစားနေလိုက်သည်..။
သင်းသင်းကို သတိရ၍ ကြည့်လိုက်ရာ သင်းသင်းအနေဖြင့် ဘာကိုမှ လှုပ်ရှားမှု မရှိတော့သည်ကို တွေ့လိုက်ရ၍ လက်ဖြင့် ကိုင်ထားသော သင်းသင်း၏ လက်ကောက်ဝတ်များကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်..။
ပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်ထားသော ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုလည်း ခုတင်ပေါ်သို့ အသာအယာ ချပေးလိုက်သည်..။ ပါးစပ်ထဲ သွင်းဆို့ထားသော ပုဝါစကိုလည်း ထုတ်ပေးလိုက်သည်..။ သင်းသင်း၏ ကိုယ်ပေါ်ကို လီးတန်ကြီး တပ်လျက် တန်းလန်းဖြင့် မှောက်လိုက်ပြီး သင်းသင်း၏ နှုတ်ခမ်းသားလေးများကို သူ၏ နှုတ်ခမ်းသားများဖြင့် ဖိကပ်ပြီး နမ်းစုတ်လိုက်သည်..။ သင်းသင်း၏ ရင်ဘတ်ပေါ်မှ သူ၏ ကိုယ်ကို အပေါ်သို့ ကုန်းကုန်းလေး လုပ်လျက် ခွာလိုက်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် သင်းသင်း၏ နို့အုံနှစ်လုံးကို အင်္ကျီပေါ်မှ နယ်ဖတ်ဆုပ်ကိုင်ပေးလိုက်သည်..။
သင်းသင်း၏ တဒင်္ဂ ငြိမ်သက်သွားသော ကာမဆန္ဒတွေက တဖြည်းဖြည်း နိုးထလာပြီဖြစ်သည်..။ လီးတန်ကြီးက စောက်ပတ်အပြည့်ဝင်ရောက်ပြီး မိမိ စောက်ပတ်ထဲ အကြားအလပ် မရှိ ထိတွေ့နေသဖြင့် လည်း စောက်ခေါင်းထဲမှာ ယားယံလာပြန်ပြီ ဖြစ်သည်..။
မိမိ၏ နို့အုံများကို လက်များဖြင့် ချေမွှပေးနေပြန်သဖြင့်လည်း တစ်ကိုယ်လုံး ဖြိုးဖြိုးဖျင်းဖျင်း နှင့် ကြက်သီးများ ထနေရသည်..။ နှုတ်ခမ်းများကို နမ်းစုပ်နေသော ဦးအုန်းကျော်၏ နှုတ်ခမ်းများကို သင်းသင်းက မျက်နှာဘေးစောင်းလျက် ဖယ်ထုတ်လိုက်သည်..။
စိတ်ထဲမှ ထိန်းချုပ်ထားသမျှကို သင်းသင်းက ငိုရှိုက်လျက် ဖွင့်ထုတ်လိုက်သည်..။ သင်းသင်း၏ ကိုယ်ခန္ဓာလေးမှာ ရှိုက်၍ ရှိုက်၍ ငိုနေသောကြောင့် လှုပ်ခါရမ်းနေသည်..။ အခုလို ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အတွက် သည်လိုသည်အချိန်တွင် အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်သွားပါက ဦးအုန်းကျော်လည်း မကောင်း ၊ အမေ ဒေါ်ပိန်သေးလည်း မကောင်း ၊ မိမိ၏ ဆရာမ ဆိုသော ဂုဏ်သိက္ခာကလည်း ကျသွားနိုင်သည့်အ ရေးဖြစ်သဖြင့် သင်းသင်း မှာ အသာပင် ငြိမ်နေလိုက်ရသည်..။
အဖက်ဖက်မှ စဉ်းစားကြည့်လေ ဘာမှ မတတ်နိုင်သော ကိစ္စ ဖြစ်သဖြင့် လည်း အဖေ …မကောင်းဘူး ဟူ၍သာ ပြောလိုက်နိုင်ပြီး ငိုယိုနေမိလေတော့သည်..။
ဝမ်းနည်းစွာ ငိုရှိုက်မှုကြောင့် သင်းသင်း၏ မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်များက စီးကျလာလျက် ရှိသည်..။
ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီးက သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ထဲတွင် တပ်လျက်တန်းလန်းကြီး ဖြစ်နေသဖြင့် သင်းသင်းမှာ အလိုမကျ ဝမ်းနည်းမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေရာမှ လီးတန်ကြီးကို ထိနေသော စောက်ခေါင်းထဲတွင် ယားကျိကျိ ပြန်ဖြစ်လာသည်..။
ဦးအုန်းကျော်က လက်များဖြင့် သင်းသင်း၏ နို့အုံနှစ်လုံးကို ဆုပ်နယ်ပေးသည်..။ နို့သီးခေါင်းကလေးကို လည်း ချေပေးသည်..။ အင်္ကျီပေါ်မှ ကိုင်ဆုပ်နယ်ပေးတာ ဖြစ်ပေမယ့် သင်းသင်းအဖို့ အခံရခက်လာသည်..။
ဦးအုန်းကျော်က မျက်ရည်စီးကြောင်းများဖြင့် ပေနေသော သင်းသင်း၏ ပါးပြင်ကို အသာနမ်းရှုံ့ပြီး သင်းသင်း၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို သူ၏ နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးဖြင့် နမ်းစုပ်လိုက်ပြန်သည်..။ ဒီတစ်ခါတွင်မတော့ သင်းသင်းမှာ လွှဲဖယ်ခြင်း မပြုတော့ပဲ စိတ်လိုလက်ရ ပြန်လည် နမ်းစုပ်မိသည်..။
ဦးအုန်းကျော်က နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်ရာမှ သူ၏ လျှာဖျားလေးကို ထုတ်လျက် သင်းသင်း၏ နှုတ်ခမ်းများကို ပွတ်သပ်ပေးသည်..။ သင်းသင်း၏ နှုတ်ခမ်းသားများကို ဖြတ်ကျော်လျက် သင်းသင်း၏ ပါးစပ်ထဲသို့ လျှာကို ထိုးသွင်းကာ သင်းသင်း၏ လျှာလေးကို ပွတ်တိုက်ထိတွေ့လိုက်သည်.။
သင်းသင်းမှာ လည်း မိမိ၏ လျှာဖျားလေးဖြင့် ဦးအုန်းကျော်၏ လျှာဖျားကလေးကို ထိ၍ ရစ်ပတ် လှုပ်ရှားပေးနေမိသည်..။ သင်းသင်းလည်း ဘာသားနှင့် ထုထားတာ မှတ်လို့လဲ..၊ သွေးသားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသဖြင့် ကာမအရသာကို ချိုဆိမ့်သည်ဟု ခံစားနေမိလေပြီ…။
ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီးကလည်း ပြန်လည် မာတောင်လာပြီ ဖြစ်သည်…။ အပျိုမလေး ဖြစ်သော သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ကလေးမှာ သူ၏ လီးတန်ကြီးကို မာတောင်လာအောင် လိုးချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ရစ်ပတ်နွယ်နေပြီ ဖြစ်သည်..။
နှုတ်ခမ်းကို စုတ်နမ်းလျက် မိမိ၏နို့များကို ကိုင်တွယ်ဆုပ်နယ်ကာ သူမအပေါ် မှောက်နေသော ဦးအုန်းကျော်ကို သင်းသင်း က လက်များဖြင့် ဖက်တွယ်လိုက်သည်..။ သင်းသင်းအနေဖြင့် ကာမဆန္ဒစိတ်တွေ ထကြွလာပြီဆိုတာကို သိသော ဦးအုန်းကျော်က သင်းသင်း၏ ဒူးနှစ်ချောင်းကို ထောင်လျက် ခြေထောက်များကို မိမိပေါင်ပေါ်သို့ ချိတ်တင်ပေးလိုက်သည်.။
ထိုအခါ စိနေသော သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်လေးမှာ ပြဲသွားသဖြင့် လီးတန်ကြီးကို ညှစ်ထားသော စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများ နည်းနည်း ကွာသွားသည်ကို ဦးအုန်းကျော် သိလိုက်ရသည်..။ အဆုံးထိ သွင်းထားသော လီးတန်ကြီးကို ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ပြွတ်ခနဲ ပြန်ထိုးသွင်းလိုက်သည်..။ ပြီးတော့ မရပ်တော့ပဲ အားရပါးရကြီး ကို လိုးညှောင့်နေလေတော့သည်..။
သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်လေးထဲတွင် စောစောက ထွက်ခဲ့သော စောက်ရည်များ နှစ်ဦးပေါင်း ထွက်လာသော သုတ်ရည်များ သွေးများနှင့် အတူ အခုမှ ထွက်လာသော စောက်ရည်များကြောင့် လီးတန်ကြီး အဝင်အထွက်မှာ ချောမွေ့လာသည်..။
သင်းသင်းမှာ ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီးက သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲ ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်ဖြင့် လိုးနေခြင်းကြောင့် ဖြိုးခနဲ ဖြင်းခနဲဖြင့် စောက်ခေါင်းထဲမှာ ရှိန်းရှိန်းမြမြလေး ဖြစ်လာသည်..။
ခံစားနေရသော ကာမအရသာ၏ ချိုဆိမ့်မှုကြောင့် တအင်းအင်း တဟင်းဟင်းဖြင့် အသံလေးထွက်ပေါ်ကာ ညည်းညူနေမိလေသည်..။ ဦးအုန်းကျော်က လိုးဆောင့်ပေးချက်များ အလိုက် သင်းသင်းအနေဖြင့် ဖင်ကြီးကော့ကာ ကော့ကာ ပေးလျက် ရှိနေပါတော့သည်..။
သြော်…အချစ်နဲ့ စစ်မှာ မတရားတာ မရှိ ၊ ဦးသူနိုင်၏ ဆိုတဲ့စကားကို ဦးအုန်းကျော်တစ်ယောက် အကောင်အထည် ဖော်နေပြီ ဖြစ်ပါတော့သည်..။ ဟင့်ဟင့် ဟင့်……အဖေ မကောင်းဘူး…ဟင့်ဟင့်…”
သင်းသင်း၏ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ငိုရှိုက်ရမှုကြောင့် တုန်လှုပ်ခါရမ်းနေပါသည်..။ သည်လိုအချိန်တွင် အုတ်အော်သောင်းတင်း ဖြစ်သွားပါက ဦးအုန်းကျော်လည်း မကောင်း ၊ အမေ ဒေါ်ပိန်သေးလည်း မကောင်း ၊ မိမိ၏ ဆရာမ ဆိုသော သိက္ခာလည်း ကျသွားမည်ကို သင်းသင်းက စဥ်းစားမိသဖြင့် ပထွေးဖြစ်သူ ဦးအုန်းကျော်အား အဖေ မကောင်းဘူး ဟူ၍သာ ပြောလိုက်နိုင်လေသည်..။ မျက်ရည်စီးကြောင်းများက မျက်ဝန်းဒေါင့်မှ စီးကျလာသည်..။ ရှိုက်၍ ငိုမိသဖြင့် ကိုယ်လုံးလှုပ်ခါလိုက်တိုင်း စောက်ခေါင်းထဲသို့ လီးတန်ကြီးက တိုးဝင်လာသလို ဖြစ်နေသည်..။
ဦးအုန်းကျော်က လီးတန်ကြီးကို သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ထဲ တန်းလန်း ထည့်ထားသဖြင့်လည်း သင်းသင်းမှာ အလိုမကျ ဝမ်းနည်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသော အနေအထားမှသည် စောက်ပတ်ထဲ၌ ယားကျိကျိ ဖြစ်လာရပြန်သည်..။ ဦးအုန်းကျော်ကလည်း သင်းသင်း၏ နှုတ်ခမ်းများကို စုတ်နမ်းပေးနေသည်..။ သင်းသင်း၏ နို့အုံကြီးများကိုလည်း ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်လျက် ဆုပ်နယ်ပေးနေသည်..။
သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ထဲကိုလည်း လီးတန်ကြီးကို ထိုးထည့်ထားသည်..။ သည်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ သင်းသင်းလည်း ဘာသားနှင့်ထုထားတာမှတ်လို့…၊ သွေးသားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ကိုယ်ခန္ဓာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်မို့လဲ ကာမအရသာကို ချိုဆိမ့်သည်ဟု ခံစားမိနေပြီ ဖြစ်သည်..။
ဦးအုန်းကျော်ကလည်း သင်းသင်း၏ ကာမဆန္ဒတွေ ထကြွလာပြန်ပြီ ဆိုသည်ကို သတိထားလိုက်မိသည်..။ သင်းသင်း၏ ဒူးနှစ်ချောင်းကို ထောင်လိုက်ပြီး ပြဲဟလာသော စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးတန်ကြီးကို ပြွတ်ခနဲ ထုတ်၍ ပြွတ်ခနဲ သွင်းကာ အားရပါးရကြီး လိုးညှောင့်လေတော့သည်..။
သင်းသင်း၏ နို့အုံကြီးများကို လက်များဖြင့် အခြေမှ ဆုပ်ကိုင်ကာ အားပါးတရပင် ဖျစ်ညှစ်ပွတ်သပ်သည်..။ စောစောက တစ်ချီလိုးပြီး၍ မပျော့တပျော့ ဖြစ်နေသော လီးတန်ကြီးက စောက်ပတ်ထဲတွင် မာတောင်လာပြီး ဝင်ထွက်နေပါသည်..။
သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ထဲတွင် စောစောက ထွက်နေသော နှစ်ဦးပေါင်း သုတ်ရည်များကြောင့် လီးတန်ကြီး အဝင်အထွက်မှာ ချောမွေ့လာလေသည်..။ သင်းသင်းမှာ မိမိ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ဦးအုန်းကျော် လီးတန်ကြီးကို ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြင့် လိုးနေခြင်းကြောင့် ဖြိုးခနဲ ဖြင်းခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားရပြီး…အားမလိုအားမရဖြင့် အံကလေးကို ကြိတ်ကာ ဦးအုန်းကျော် လက်မောင်းကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်လိုက်မိသည်..။
ဦးအုန်းကျော်က စောက်စိလေးကို လက်ဖြင့် အသာဖိကြိတ်ရင်း လီးတန်ကြီးကို စောက်ပတ်ထဲမှ ဒစ်ဖျားထိ ထွက်အောင် ဆွဲထုတ်လျက် သားအိမ်ဝအထိ ဒစ်အဖျားရောက်အောင် ဆောင့်သွင်းလိုက်လေသည်..။ ဦးအုန်းကျော်၏ အသက်ရှူသံများ ပြင်းလာသည်နှင့် အတူ လီးတန်ကြီးကို သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ထဲ ဆောင့်ဆောင့် လိုးလိုက်သဖြင့် သင်းသင်းမှာ အင့်ခနဲ အင့်ခနဲ ဖြစ်သွားရလေသည်..။
လီးတန်ကြီး စောက်ခေါင်းထဲသို့ ဆောင့်ဝင်လာချိန်တွင် နာကျင်သော ခံစားရချက်နှင့် အတူ ကောင်းသောအရသာပါ တွဲဖက်လာသဖြင့် သင်းသင်းမှာ ဖင်ကို ကော့၍ကော့၍ ပေးမိပါတော့သည်..။
ဦးအုန်းကျော်မှနေ၍ သင်းသင်း စောက်ပတ်ကို လီးတန်ကြီးဖြင့် အသားကုန် ဆောင့်လိုးပြီး စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးအဆုံး ထိုးကပ်ထားလိုက်လျက် သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ သုတ်ရည်များ ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့သည်..။ သင်းသင်းမှာ သုတ်ရေ ပူပူနွေးနွေးများက စောက်ခေါင်းနံရံအတွင်းသို့ လီးတန်ကြီး ထိပ်မှ ဖြန်းလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်တည်းလိုလိုမှာပင် ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီးကို စောက်ခေါင်းကြွက်သားမျှင်များဖြင့် ညှစ်ပစ်လိုက်ကာ စောက်ခေါင်းထဲမှ သုတ်ရည်များ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်မိပါတော့သည်..။
သင်းသင်း လီးတန်ကြီးနှင့် စောက်ပတ်တို့ ထိုးသွင်း ထိုးထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဖော်မပြတတ်လောက်အောင် ကောင်းမွန်လှသော ကာမအရသာ ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း ခံစားမိသွားပြီ ဖြစ်သည်..။
“ သမီး…ကောင်းရဲ့လား…ဟင်…အဖေလေ…စိတ်ကို မထိန်းနိုင်တော့လို့ သမီးကို လိုးဖြစ်သွားတာပါ…အဖေ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါကွယ်……”
“ လိုးပြီးမှ ခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်တိုင်း သမီးက ခွင့်လွှတ်ရမှာလား…..၊ သမီး စောက်ပတ်ကို အဖေ လီးကြီးနဲ့ လိုးချင်တိုင်း လိုးပြီးနေပြီလေ…၊ သမီးကတော့ မရဘူး…အမေပြန်လာရင် တိုင်ပြောလိုက်မယ်……….”
“ မတိုင်ပါနဲ့…သမီးရယ်…အဖေ့ကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်ရင် သမီး အဖေ့ကို ကြိုက်သလို လုပ်ပါ…၊ အဖေ သမီးအမေကို စပြီး ယူကတည်းက သမီးကို ပစ်မှားမိမှာ စိုးလို့ နှင်းနှင်းတို့ အိမ်ကို ပို့ထားခဲ့တာပါ…သမီးရယ်…၊ အခုတော့ သမီး ရဲ့ စောက်ပတ်ကြီးကို မြင်လိုက်ရတာနဲ့ အဖေ မလိုးပဲ မနေနိုင်တော့လို့ လိုးလိုက်မိတာပါ…သမီးရယ်…” ဦးအုန်းကျော်က သင်းသင်းကို တတွတ်တွတ် ဖြင့် တောင်းပန်နေလေသည်..။ သူ၏ လီးတန်ကြီးကိုကာ သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ထဲမှ မချွတ်သေးပဲ တပ်လပ်ကြီး လုပ်ထားဆဲပင် ဖြစ်သည်..။ သင်းသင်းမှာ ဦးအုန်းကျော်၏ အကျိုးအကြောင်း ဖြေရှင်းမှုကြောင့် စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်သွားရသည်က အမှန်ပါ..။ အမေ့ကို ပြန်တိုင်လဲ ဘာထူးတော့မှာလဲ..။ မိမိ စောက်ပတ်ကလေး အသစ်ပြန်ဖြစ်လာတော့မှာမှ မဟုတ်တော့တာ…ပဲလေ…။ နောက်ပြီး လီးနှင့် စောက်ပတ်တို့ လိုးခြင်းခံခြင်းကြောင့် ရရှိလာသော ကာမအရသာကိုလည်း နှစ်သက် စွဲလန်းမိနေပြီလေ…။
“ အင်း….ဖယ်ပါ….အဖေ့ကို သနားလို့ အမေနဲ့ ပြန်မတိုင်တော့ဘူး….အခုတော့….တော်ပြီ….ဆင်းတော့….၊ သမီး…အထဲက အောင့်လှပြီ…..”
ဦးအုန်းကျော် က သင်းသင်း၏ ပါးပြင်ကလေးကို ရွှတ်ခနဲ နမ်းလိုက်ပြီး သင်းသင်းကိုယ်ပေါ်မှ ထကာ စောက်ပတ်ထဲ ဝင်နေသော လီးတန်ကြီးကို ဆွဲချွတ်လိုက်သည်..။
လီးတန်ကြီးက စောက်ပတ်ထဲမှ ပြွတ်ခနဲ ကျွတ်ထွက်လာသည်..။ လီးတန်ကြီး ထွက်သွားသည်နှင့် သင်းသင်း စောက်ပတ်ထဲမှ သုတ်ရည်များ က ဖွတ်ခနဲ…လျှံကျလာသည်..။ ခါးပေါ်ရောက်နေသော ထမီကို ဆွဲချလိုက်ပြီး ထမီကို စုကိုင်လျက် စောက်ပတ်ထဲသို့ ထိုးထည့်ထားလိုက်သည်..။
ဦးအုန်းကျော်မှာ သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ဖောင်းဖောင်းအိအိကြီးနှင့် ပေါင်တန် ဝင်းဝင်းများကို သိမ်းကြုံးကြည့်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်..။ သင်းသင်းမှာ ပျော့တော့တော့ဖြစ်နေသော ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီးကို မျက်စိလေး စွေလျက် လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်..။ လီးတန်ကြီးကို ကြည့်မိကာမှ သင်းသင်း ရင်ထဲမှာ ဘလောင်ဆူ သွားရသည်..။
စောစောက မိမိစောက်ပတ်ထဲ အကြမ်းပတမ်း အင်တိုက်အားတိုက် တိုးဝင်ခဲ့သော လီးတန်ကြီးက အခုတော့ ဘာကြောင့် ငိုက်ကျနေတာလဲဟုလည်း တွေးနေမိသည်..။ သူစားချင်တာတွေကို ဝလန် အီဆိမ့်သွားအောင် စားပြီးသွားလို့ မှိန်းသွားတာများလား ဟုပင် စဉ်းစားမိသည်..။
သူက အီဆိမ့်သွားသလို မိမိ စောက်ပတ်ကလေးလည်း အီဆိမ့် သွားသည်အထိ ကောင်းကောင်းလိုးပေးခဲ့သော လီးတန်ကြီး အကြောင်း တွေးမိပြီးချိန်မှာတော့ သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်လေးထဲမှာ ယားကျိကျိ ဝေဒနာ ခံစားလာရပြန်သည်..။
“ အင်း….မသင့်တော်ပါ ဘူးလေ….”
အဖေလို နေခဲ့သော ပထွေးဖြစ်သူ ဦးအုန်းကျော်က မိမိ စောက်ပတ်ကို ပါကင်ဖွင့်လိုက်သဖြင့် နာကျင်ခံခက် ဖြစ်ရသော်လည်း လီးတန်ကြီးကြောင့် ရရှိခံစားခဲ့ရသော ကာမအရသာတို့က အီနေအောင် ဖုံးလွှမ်းသွားသဖြင့် နောက်တစ်ခါ အလိုးခံချင်စိတ်ကလေး ပေါ်လာပြန်သည်..။ သူမကိုယ် သူမလည်း အံ့အားသင့်မိရသည်..။ မိမိသည် တဏှာအားကြီးသော မိန်းမတစ်ယောက်များ ဖြစ်နေပြီလား…။ အခုလေးတင် အားရအောင် ခံထားခဲ့ရပြီး မကြာခင် အလိုးထပ်ခံချင်စိတ်တွေ ပြင်းပြနေရတာ တွေးမိတော့ ….အိုး..ရှက်စရာ ကောင်းလိုက်တာ…နော်…။
ဒါပေမယ့် စောက်ခေါင်းထဲမှ တစစ်စစ် နာကျင်ပြီး စောက်စိကလေးမှာ ကျိန်းစပ်လျက် ဆီးကျင်သလိုကြီး ဖြစ်နေသဖြင့် အလိုးခံရမှာကိုလည်း ကြောက်နေမိပြန်သည်..။ ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်ပြီး ဦးအုန်းကျော်၏ လီးကြီးကို စွဲမက်စွာ ကြည့်နေဖြစ်သော သင်းသင်းမှာ ဦးအုန်းကျော် ပုဆိုးကောက်ဝတ်လျက် အခန်းထဲမှ ထွက်သွားမှပင် သက်ပြင်းမောကို ချလိုက်မိရပါတော့သည်..။
သင်းသင်းမှာ ဦးအုန်းကျော် အခန်းထဲမှ ထွက်သွားသည်နှင့် အခန်းတံခါးကို ပိတ်ပြီး စောက်ပတ်ကို ဖြဲလျက် စောက်ခေါင်းအတွင်းမှ အရည်များ ပေပွနေသည်ကို ထမီနှင့် စင်အောင် သုတ်လိုက်သည်..။ ထမီတွင်ကား သွေးစသွေးနလေးများနှင့် သုတ်ရည်များက ပေပွသွားလေသည်..။
ရေချိုးခန်းသို့ သွားလိုက်ပြီး ရေမိုးချိုးကာ အားလုံးကုန်စင်အောင် ဆေးကြောလိုက်ရသည်..။ အမေပြန်လာတော့ ထမင်းဝိုင်းမှာ မိသားစု စုံညီစွာဖြင့် ထမင်း အတူတူ သွားစားသည်..။ ဦးအုန်းကျော်မှာ သင်းသင်းက ဒေါ်ပိန်သေးအား ပြန်တိုင်မည် စိုးရိမ်သဖြင့် ကယောင်ချောက်ချား ဖြစ်နေပါသည်..။ သင်းသင်းကတော့ ခပ်တည်တည်နှင့် နေလိုက်သည်..။ အမေဖြစ်သူ နှင့် ပုံမှန်အတိုင်းပင် စကားတွေ ဖောင်လောက်အောင် ပြောနေသည်..။
ထမင်းစားပြီး ထမင်းဝိုင်းမှ ထ၍ လက်ဆေးပြီးချိန်တွင် ဦးအုန်းကျော်က သင်းသင်းအနားကပ်၍ …ကျေးဇူးပါပဲ…သမီးရယ်….ဟု ပြောသွားသေးသည်..။ သင်းသင်းက ဦးအုန်းကျော်ကို စကားမပြောချင်သလို လုပ်နေလိုက်သည်..။ ဘာလို့ ပြန်တိုင်မှာလည်း…၊ တိုင်လို့လည်း ဘာတွေ ထူးလာအုံးမှာလည်း..၊ မတိုင်တော့ဘူး ဟု ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ဖြစ်လေသည်..။ ထိုညက အမေတို့ အိပ်ခန်းထဲတွင် အမေ ဒေါ်ပိန်သေးကို ဦးအုန်းကျော် အသာလေး လိုးနေသည်ကို သင်းသင်း ချောင်းကြည့်မိသည်..။ အမေ့ကို အားရပါးရကြီး မဟုတ်ပဲ အသာလေး လိုးဆောင့်နေသော ဦးအုန်းကျော်၏ လီးးတန်ကြီးကို မြင်တွေ့ရသဖြင့် သင်းသင်းမှာ စောက်ပတ်လေး ဖုဖောင်းလာလျက် ခံချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်နေမိပြန်သည်..။
မိမိကို နေ့ခင်းက လိုးထားသော လီးတန်ကြီး ဟူ၍ု သိနေသဖြင့် သူမစောက်ပတ်လေးထဲသို့ ထိုလီးတန်ကြီး ဝင်လာစေချင်သော ဆန္ဒ တွေ ဖြစ်ပေါ်ကာနေသည်..။ ချောင်းကြည့်ရင်းက သင်းသင်းမှာ မိမိစောက်ပတ်ထဲ ယားယံလာခဲ့သော်လည်း လက်ကလေးဖြင့် ထိကြည့်ရာ နာနေသဖြင့် ယားယံမှုကို ကြိတ်မှိတ် ခံစားနေရလေသည်..။
လက်ဖြင့်လည်း ကလိခြင်း မပြုလုပ်လိုတော့ချေ..။ ဦးအုန်းကျော်မှ ကာမသင်တန်းကို အတင်းတက်စေပြီး ကာမသင်ခန်းစာတွေ လက်တွေ့ပို့ချပေးသွားသဖြင့် ကာမအရသာ မီးတောက်များက သင်းသင်းထံတွင် အလျှံတညီးညီးဖြင့် တောက်လောင်နေခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်..။
နောက်တစ်နေ့တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ သွား၍ အလှူအတွက် စီစဉ်ရသဖြင့် အလုပ်တွေ ရှုပ်နေကြလေသည်..။ ညဖက် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဦးအုန်းကျော်နှင့် ဒေါ်ပိန်သေးတို့မှာ မနက်စောစောထပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားမှာမို့ စောစော အိပ်ယာဝင်သွားကြသည်..။
သင်းသင်းလည်း စောစော အိပ်ယာဝင်ပြီး တစ်ရေအနိုးတွင် ထ၍ အပေါ့သွားသည်.။ အပေါ့သွားရင်းဖြင့် စောက်ပတ်ကို ရေဆေးရာ နာကျင်မှု လုံးဝ မရှိတော့သည်ကို တွေ့ရလေသည်..။ စောက်ပတ်ကို ရေဆေးရင်းဖြင့် လက်ဖြင့် ပွတ်သပ်မိရာကနေ စောက်ပတ်ထဲကို လက်ညှိုးဖြင့် နှိုက်မွှေကြည့်ရာ ကောင်းလှသော ကာမအရသာကို ခံစားရမိလေသည်..။
ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီးနှင့် လိုးသည့်အချိန်က ရသော ကာမအရသာမျိုးကို မရသဖြင့် သင်းသင်းမှာ မချင့်မရဲ ဖြစ်နေရသော်လည်း မိမိလက်ညှိုးဖြင့်သာ ပြီးသွားအောင် အာသာဖြေရတော့သည်..။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အလှူပြီးသွားပြီ..။ ကိစ္စဝိစ္စတွေ အားလုံးလည်း လုပ်လို့ သိမ်းလို့ ပြီးကုန်ပြီ..။ နောက်နေ့တွင် သူမ အလုပ်ရှိရာသို့ ပြန်ရတော့မည်..။
ဦးအုန်းကျော်နှင့် ဒေါ်ပိန်သေးတို့မှာ အလှူတွင် ပင်ပန်းခဲ့ကြသဖြင့် စောစော အိပ်ယာဝင်သွားလေသည်..။ သင်းသင်းတစ်ယောက်မှာတော့ ကုတင်ပေါ်တွင် လှဲနေပေမယ့် အိပ်လို့မပျော်သေးပါ..။ ခြင်ထောင်ကို ချထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း မနက်ဖြန် ပြန်ရတော့မည့် အရေးကို တွေးပြီး ဟိုလူးဒီလှိမ့်ဖြင့် အိပ်၍ မရနိုင်ရှာ..။
စောင်မခြုံထားသဖြင့်လည်း လူးလှိမ့်လိုက်၍ ထမီမှာ ဘယ်ဖက်ပေါင်ပေါ်တွင် လိပ်၍ တက်နေလေသည်..။ သည့်အတွက် ခြေသလုံးမှ ပေါင်တန်တစ်လျှောက်လုံး အဝတ်ကင်းမဲ့ပြီး ပေါင်တန်ဝင်းဝင်းစက်စက်ကြီးမှာ အထင်းသား ပေါ်လို့နေလေသည်..။ သင်သင်းမှာ ဟိုနေ့ ကြုံလိုက်ရသော ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီးကို သတိရနေမိသည်..။
ဒါကြောင့် မိမိနို့ကလေးကို မိမိဖာသာ လက်ဖြင့် ကိုင်၍ ဆုပ်နယ်နေမိသည်..။ ပြီးတော့ လက်ဖဝါးဖြင့် စောက်ပတ်မို့မို့ဖောင်းဖောင်းလေးကိုလည်း အုပ်ကိုင်လိုက်မိသည်..။ အမွှေးကြမ်းများကို ထိုးထိမိပြီး ထမီပေါ်မှ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးကို လက်ခလယ်ဖြင့် ပွတ်လိုက်သည်..။ ယားယံလာသော ဝေဒနာကို ခံစားရသဖြင့် ပေါင်ပေါ်ဖုံးနေသော ထမီကို ဗိုက်ပေါ်ရောက်အောင် လှန်တင်လိုက်သည်..။
စောက်ပတ်လေးကို ပကတိ အတိုင်း ကိုင်တွယ်ရသောအခါ လက်ခလယ်ဖြင့် အသာပွတ်ပေးပြီး အကွဲကြောင်းထဲ လက်ညှိုးဖြင့် အသာထိုးသွင်းထည့်ပြီး သွင်းလိုက်နှုတ်လိုက် လုပ်နေမိသည်..။ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကာမအရသာက အီဆိမ့်နေအောင်ပင် ကောင်းလှသဖြင့် ပါးစပ်မှ ညည်းညူမိပြီး တင်ပါးကြီးကိုလည်း လှုပ်ရမ်းပေးနေမိသည်..။
လက်ညှိုးနှင့် သာမကပဲ လက်ခလယ်ပါ ပူးကာ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက်မိသည်..။ လက်ညှိုးနှင့် လက်ခလယ် နေရာတွင် ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီးနှင့် ဆိုလျင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲဟု တွေးမိသေးသည်..။ သင်းသင်း၏ ငုတ်လျှိုးနေသော ကာမဆန္ဒများကို ဦးအုန်းကျော်က စတင်၍ လာရောက် နှိုးဆွ ပေးထားခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား..။
အခုတော့ သွေးသားဆူဖြိုးသော သင်းသင်းမှာ ကာမအရသာများကို တောင့်တလျက် မိမိ၏ စောက်ပတ်ထဲကို လီးအစစ်ဖြင့် လိုးခြင်းကို ခံယူနေချင်ပြီ ဖြစ်သည်..။ ထိုအချိန်တွင် သင်းသင်း၏ ကုတင်ပေါ်သို့ ခြင်ထောင်ဟ၍ လူတစ်ယောက် တက်လိုက်သလို ငြိမ့်ခနဲ ဖြစ်သွားကြောင်း သိလိုက်သည်..။ သင်းသင်းမှာ စောက်ပတ်ထဲ လက်ညှိုးနှင့် လက်ခလယ် သွင်းလျက်တန်းလန်းထားကာ အသာငြိမ်နေလိုက်သည်..။
ဘယ်သူ ဖြစ်နိုင်မလဲဟူ၍လည်း တွေးတောကြည့်နေသည်..။ အိပ်ယာမဝင်ခင်က ခြံတံခါးနှင့် အိမ်တံခါးများကို သူမကိုယ်တိုင် ပိတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်..။ သည်တော့ အိပ်ယာပေါ်တက်လာသူမှာ အပြင်ကလူ မဖြစ်နိုင် ..။ အိမ်မှာ ရှိတာကလည်း လူသုံးယောက်တည်းမို့ အမေ ဒေါ်ပိန်သေးကလည်း သူမဆီကို အခုလို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် လာမည်မဟုတ်သဖြင့် သေချာပေါက် ဒါ…သူမပထွေး ဦးအုန်းကျော်ပဲ ဖြစ်ရမည်ဟု အတတ် တွေးမိလေသည်..။
“ ပြွတ်…ဘွတ်…..စွပ်…..ဖွတ်…..ဘွတ်…….ဖွတ်………ပြွတ်……….” သင်းသင်းအနေဖြင့်လည်း ဦးအုန်းကျော် အခန်းထဲ ဝင်ချင်လျင် ဝင်လို့ရအောင် အခန်းတံခါးကို စေ့ရုံ စေ့ထားခဲ့သည်ပါ..။ သင်းသင်းရင်ထဲ ကြိတ်ပြီး မျှော်လင့်နေသော ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝတော့မည်မို့ စိတ်ထဲမှာ လှိုက်ခနဲ ဝမ်းသာမိသည်..။
သို့သော် သေချာအောင် လုပ်မှ ဖြစ်မည်…။ ဦးအုန်းကျော် သာဖြစ်လျင်တော့ ဒီအတိုင်းတော့ အလွယ် မပေးနိုင်..။ နည်းနည်းတော့ မူရအုန်းပေမည်..။ ကုတင်ပေါ် တက်လာသူက ခြင်ထောင်ထဲ ဝင်လာပြီး သင်းသင်း၏ ကိုယ်လုံးကို စမ်းလျက် ဘေးနားတွင် ဝင်ထိုင်သည်.။ သင်းသင်း၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် လိုက်လံစမ်းနေပြီး ထမီမရှိသော ပေါင်တန်ကြီးတွေကို စမ်းမိသွားလေသည်..။ ပေါင်တန်တစ်တစ်ကြီးတွေမှာ ထမီမရှိပဲ အသားချည်း ပေါ်နေသဖြင့် ထိုသူက လက်ဖြင့် ပေါင်တန်တွေကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးနေသည်..။
“ ဘာလာလုပ်တာလဲ….သမီး အော်လိုက်မယ်….နော်…..”
“ သမီးရယ်…မအော်ပါနဲ့…အဖေလေ…မနေနိုင်လို့ပါ…သမီးရယ်…သမီးရဲ့ စောက်ပတ်လေးကို ကြိုက်လွန်းလို့ အခုထပ်ပြီး လိုးချင်လို့ပါသမီးရယ်…”
“ ဘာ…မနေနိုင်ရမှာလဲ…မနေနိုင်ရင် ..အမေ့ကို သွားလိုးပေါ့…သမီးက အဖေ့မယားမှ မဟုတ်ပဲ…ဟာ….“
“ သမီးရယ်…ဒီလို မပြောပါနဲ့…သမီးအမေက အခုဆိုရင်…မီးယပ်သည် ဖြစ်နေတာလေ..၊ အဖေ့မှာ လိုးရတာ အာသာမပြေလို့ပါ…၊ သမီးကို ဒီတစ်ခါပဲ လိုးမှာပါ သမီးရယ်…၊ နော်….တစ်ခါတည်းပါ…ကွယ်….”
ဦးအုန်းကျော်က သင်းသင်း၏ ပေါင်တံများဆီသို့ ခပ်ဖိဖိလေး တိုးကပ်ကာ ပေါင်တန်ကြီးတွေကို လက်ဖြင့် အသာပွတ်ပေးနေရင်း စကားပြောနေခြင်း ဖြစ်သည်..။ အမှန်ဆိုလျင် သင်းသင်းလည်း ဦးအုန်းကျော် လီးကြီးဖြင့် သူမစောက်ပတ်လေးထဲ လိုးသွင်းတာ အရမ်းပဲ ခံချင်နေပြီဖြစ်သည်..။ ဒါပေမယ့် အညှာလွယ်သည်ဟု အထင်သေးသွားမှာလည်း စိုးရိမ်နေ၍သာ မူနေရခြင်း ဖြစ်သည်..။ ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီးကို စိတ်ထဲကတော့ အလွန်အမင်းကို တောင့်တနေပြီမို့ မလိုးပဲနှင့် ပြန်သွားလျင် သူမဆန္ဒတွေ မပြည့်ပဲဖြစ်သွားမှာကိုလည်း စိုးရိမ်မိသေးလေသည်..။
“ ဒီတစ်ခါတည်းပဲနော်….ဟွန်း….သူများကိုပဲ လုပ်ချင်နေတော့တယ်…“
သင်းသင်းထံမှ ခွင့်ပြုချက် ရသဖြင့် ဦးအုန်းကျော်မှာ သင်းသင်းနှင့် ယှဉ်လျက် အိပ်လိုက်သည်..။ အမှောင်ထဲမှာ စမ်းလျက် သင်းသင်း မျက်နှာလေးကို ဆွဲယူလျက် နမ်းစုပ်လိုက်သည်..။ သင်းသင်းကလည်း အားကျမခံ ပြန်လည် နမ်းစုပ်ပေးရင်း တုံ့ပြန်လိုက်သည်..။ ဦးအုန်းကျော် လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ အင်္ကျီကို အပေါ်သို့ ဆွဲတင်လိုက်ပြီး ဘရာစီယာကိုလည်း ဆွဲလှန်လိုက်သည်..။
သင်းသင်းမှာ အားမရတော့သဖြင့် ဘရာစီယာကို ချိတ်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပြီး အပေါ်သို့ လှန်တင်ပစ်လိုက်သည်..။ နို့အုံကြီးတွေက လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖြစ်သွားလေသည်..။ ဦးအုန်းကျော်က နို့ကြီးတွေကို လက်ဖဝါးဖြင့် အုပ်ကိုင်လျက် နို့သီးလေးတွေကို ချေမွကလိ လိုက်သည်..။ စိတ်ဇောတွေ ထန်ပြင်းနေပြီ ဖြစ်၍ နို့အုံကြီးမှာ တင်းမာဖောင်းကားနေပြီး နို့သီးခေါင်းတွေကလည်း ချွန်ကော့ ထောင်ထနေပြီ ဖြစ်သည်..။ ဦးအုန်းကျော်က နို့သီးတွေကို ခပ်ဖိဖိလေး ညှစ်ပေးလိုက်ရာ….
စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ သင်းသင်း နှုတ်မှပင် ထုတ်ကာ ညီးညူလိုက်မိသည်..။ အမှောင်ထဲမှာ ဖြစ်သည်မို့လည်း သင်းသင်း ရှက်ကြောက်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း မရှိပဲ စိတ်ရဲလက်ရဲ ရှိမိသည်..။ အမှောင်ကား…မိန်းမသားတို့၏ အရှက်ကို ကွယ်ဝှက်ထားတတ်ချေသည်..။ ဦးအုန်းကျော်က နှုတ်ခမ်းကို နမ်းစုတ်ရင်း နို့အုံကြီးတွေကို နယ်ညှစ်လိုက် ၊ နို့သီးခေါင်းတွေကို ဆွဲညှစ်လိုက် လုပ်ပေးနေသည်..။ လက်တစ်ဖက်ဖြင့်လည်း စောက်ပတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးပေါ်သို့ အုပ်ကိုင် ဖိပွတ်လိုက်ပြန်သည်..။ သင်းသင်းက ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ကားပေးလိုက်သည်..။ ထမီက ခါးမှာ လုံးနေသကဖြင့် ဦးအုန်းကျော်မှာ ထမီဖယ်စရာမလိုပဲ စောက်ပတ်ကို တိုက်ရိုက်တွေ့ထိကာ အသာအုပ်ကိုင်၍ ရခြင်းဖြစ်သည်..။ လက်ဖဝါးဖြင့် အုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း လက်ခလယ်ဖြင့် သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများကို ဆွဲပွတ်ပေးလိုက်သည်..။
ဦးအုန်းကျော်မှာ လက်ခလယ်ဖြင့် သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေး တလျှောက် ထိရုံလေးထိကာ ပွတ်ဆွဲပေးနေရင်းမှ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းအတိုင်း နှုတ်ခမ်းသား ဝဲယာအစပ်များကို နှဲ့နှဲ့သွင်းပြီး အသာလေး ဆွဲပွတ်ပေးလိုက်သည်..။
“ အင်း ဟင်း…ဟင်း…အဖေရယ်…”
သင်းသင်းမှာ စောက်ပတ်ထဲမှ ယားယံလာမှုများကြောင့် တင်ပါးကို ကော့ပေးပြီး ဒူးခေါင်းများကို ထောင်လိုက်သည်..။ ဦးအုန်းကျော်မှာ သင်းသင်းကို တစ်ခါထဲ ဆွဲလိုးပစ်လိုက်ချင်သော်လည်း မဖြစ်သေးမှန်း သိနေသည်..။ ကာမအရသာကို သေချာစွာ ခံစားခြင်းဖြင့် သူ့ကို စွဲသွားအောင်လုပ်ပါမှ အမြဲတမ်း လို၍ရမည်ဆိုသည်ကို သိထားသည်..။
သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ထဲမှာတော့ စောစောက မိမိဖာသာမိမိလက်ဖြင့် သွင်းထုတ်လုပ်ထားသဖြင့် စောက်ရည်ကြည်များ ရွှဲရွှဲစိုနေပြီဖြစ်သည်…။ ဦးအုန်းကျော်က စောက်ရည်များ စိုရွှဲနေသော သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ လက်ခလယ်ရော လက်ညှိုးပါ ထိုးသွင်းပြီး သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် လုပ်ပေးလိုက်လေသည်..။ သင်းသင်းမှာ ဦးအုန်းကျော်က ကာမခလုပ်တွေ ပြိုင်တူဖွင့်ပေးနေတော့ ငြိမ်မနေနိုင်တော့ချေ..။
“ အင်း…အင်း…..အဖေရယ်…အား အား.သမီး မနေတတ်တော့ဘူး…အဖေ..လိုးချင်လဲ လိုးပါတော့ ဟင်း…အင်း…အင်း….”
“ အေးပါ သမီးရယ်…သမီး ကောင်းအောင် အဖေ လုပ်ပေးနေတာပါ….”
ဦးအုန်းကျော်မှာ သင်းသင်း၏ ကာမခလုပ်များကို ဖွင့်နေခြင်းအား တော်ပြီဟု ယူဆလျက် ရပ်လိုက်သည်..။ ကုတင်ပေါ်ထထိုင်လျက် ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်သည်.. ။ လီးကြီးက ထောင်းခနဲ ထောင်ထလာတာကို ဦးအုန်းကျော် မိမိဖာသာ သိလိုက်သည်..။
မိမိအပေါ်မှ လက်တွေ လှုပ်ရှားမှု မရှိတော့သော်လည်း အမှောင်ထဲမှာမို့ လှုပ်ရှားသံတွေ ကြားနေရ၍ သင်းသင်းမှာ ဘာတွေဆက်လုပ်ဦးမှာလည်း ဟူ၍ တွေးနေမိသည်..။ မကြာမီ သင်းသင်း၏ လက်တစ်ဖက်ကို ဦးအုန်းကျော်က စမ်းပြီး ဆွဲယူလျက် သူ၏ လီးတန်ကြီးပေါ် တင်ပေးလိုက်သည်..။
သင်းသင်းမှာ အမေ့..ဟူ၍ ယောင်မအော်မိအောင် စိတ်ကို ထိန်းလိုက်ရသည်..။ လီးတန်ကြီးကို မျက်မြင်မတွေ့ရသော်လည်း ကိုင်ကြည့်ရုံဖြင့် မာတောင်နေသော အချောင်းကြီးဖြစ်ပြီး သူမ၏ လက်တစ်ကိုင်မက ကြီးမားကြောင်းကို သိလိုက်ရသည်..။
လီးတန်ကြီးမှာ ဘယ်လိုဆွဲအားတွေ ရှိသည်ကို သင်းသင်း မသိသော်လည်း လက်ထဲတွင် မာတောင်နေ၍ နူးညံ့လှသဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ဖြစ်ညှစ်မိသည်..။ လီးတန်ကြီး အရှည်ကလည်း နဲနဲနောနော မဟုတ်..။ ဒါကြီးနဲ့ သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲကို လိုးဘူးသည်ဆိုတာကို ယုံရခက်ခက်ပင် ဖြစ်မိသည်..။ စောက်ပတ်ကြီးနဲ့ ဆန့်မှဆန့်ပါ့မလား ဟုလည်း စိုးရိမ်စိတ် ဝင်မိသည်..။ သို့ပေမယ့်လည်း သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီးကို ဟိုတစ်နေ့က လိုးခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ ရတော့ရကောင်းပါရဲ့ဟုလည်း ပြန်တွေးမိသည်..။
အမှောင်ထဲမှာ ကိုင်ကြည့်မိ၍ ကြီးတာပဲ ဖြစ်မည်ဟု ဖြေတွေးကလေး တွေးလိုက်သည်.။ လီးတန်ကြီးကို ရှေ့နောက် လျှောတိုက်၍ ပွတ်သပ်ကာ ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်သည်..။ လီးတန်ကြီး၏ နူးညံ့သော အထိအတွေ့ကြောင့် ကိုင်ရသည်မှာ ကောင်းမှန်းသိလာရသည်..။
“ သမီး….ဒူးတွေထောင်ပြီး ဖြဲလိုက်နော်….”
ဦးအုန်းကျော်က လီးကိုင်ထားသော သင်းသင်း၏ လက်ကို လီးပေါ်မှ အသာဆွဲဖယ်လိုက်ပြီး သင်းသင်း၏ ခြေထောက်များကို စမ်းကိုင်တွယ်ပြီး ပြောလိုက်သည်..။ သင်းသင်းမှာ ကိုင်၍ ကောင်းနေတုန်း လီးတန်ကြီးကို လက်ထဲမှ လွှတ်လိုက်ရသဖြင့် ရင်ထဲ ဟာသွားရသည်..။ ဒူးထောင်ခိုင်းလိုက်သဖြင့် သင်းသင်းက ဒူးနှစ်လုံးထောင်ပြီး ပေါင်တွေကို ဖြဲ၍ ကားပေးလိုက်သည်..။ ဦးအုန်းကျော်က ဒူးနှစ်ချောင်းထောင်ထားသည့် အကြားတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်သည်..။ ဘယ်လက်ဖြင့် သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်အုံကို စမ်းကိုင်၍ ညာလက်ဖြင့် လီးတန်ကြီးကို ကိုင်ကာ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေး၏ အထက်အောက် ပွတ်ပေးလိုက်သည်..။ ပြီးမှ စောက်ပတ်အုံကို ကိုင်ထားသော လက်ကို လွှတ်လိုက်သည်..။
“ သမီး….အဖေ..လိုးတော့မယ် နော်…”
“ သမီး စောက်ပတ်ကို လက်နဲ့ ဖြဲထားပေး…”
ဦးအုန်းကျော်က သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားပေါ် လီးတန်ကြီး တေ့ထား၍ ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်ရာ ကာမပိုးတွေ ထကြွနေသော သင်းသင်းက စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲဖြဲ ပေးလိုက်သည်..။
ဦးအုန်းကျော်က လီးတန်ကြီးကို ဖင်အားဖြင့် ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်.။ လီးတန်ကြီးက သင်းသင်းဖြဲပေးထားသော စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းအတိုင်း တဝက်လောက် ဝင်သွားသည်..။ သင်းသင်းမှာ လီးတန်ကြီး မဆန့်မပြဲ ဝင်သွားသဖြင့် နာသွားရကာ စောက်ပတ်ဖြဲပေးထားသော လက်တွေကို လွှတ်လျက် ဦးအုန်းကျော်၏ ရင်ဘတ်ကို တွန်းထားလိုက်သည်..။
“ သမီး ..မနာအောင် အဖေ လိုးပေးပါ့မယ်ကွယ်…ခဏတော့ သည်းခံလိုက်နော်….သမီး…”
ဦးအုန်းကျော်က သင်းသင်းကို အသာအယာချော့ပြောလိုက်ပြီး လီးတန်ကြီးကို အသာလေး ပြန်ဆွဲထုတ်လျက် အသာလေး ပြန်ထိုးသွင်းလိုက်သည်..။ သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ထဲ ဝင်နေသော လီးတန်ကြီး၏ တဝက်ခန့်မျှကိုပဲ အသွင်းအထုတ် ဖြေးဖြေးချင်း လုပ်ပေးကာ ဆယ့်လေးငါးကြိမ်ခန့် ရှိလာသောအခါတွင်မတော့ သင်းသင်းမှာ အရသာ ရှိလာသည်..။
စောက်ပတ်ထဲမှလည်း စောက်ရည်များက ထွက်လာရာ လီးတန်ကြီး အဝင်အထွက် ရှောရှောရှူရှူ ဖြစ်လာသည်..။
“ ပြွတ်…..ဖွတ်..စွတ်…..ဖတ်……ပြွတ်……. ”
ဦးအုန်းကျော်မှာ မိမိ၏ လီးတန်ကြီး ဝင်ထွက်လိုးနေသည့်အပေါ်တွင် သင်းသင်းတစ်ယောက် အရသာရှိကာ ကောင်းလာပြီဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်သည်..။ ဒီအတွက် လီးတန်ကြီးကို ဒစ်ဖျားပေါ်သည်အထိဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး အဆုံးထိ ဝင်သွားအောင် ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်..။
ဦးအုန်းကျော်၏ လိုးဆောင့်မှုက သားအိမ်ဝထိတောင် ရောက်သွားသဖြင့် သင်းသင်းမှာ ညည်းညူလိုက်သည်..။ စောစောကလောက် နာကျင်မှု မရှိတော့သော်လည်း သားအိမ်ဝကို လီးကြီးထိပ်ဖြင့် ထိုးထိမိလိုက်သဖြင့် အောင့်သွားရသည်..။ ဦးအုန်းကျော်မှာ သင်းသင်းနာတာအောင့်တာတွေ ပျေက်သွားရန်အတွက် စိတ်မထိန်းတော့ပဲ လီးတန်ကြီးကို အဆုံးထိ အသွင်းအထုတ် ခပ်မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးလိုက်သည်..။ သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်များ ပိုထွက်လာနေသဖြင့် လီးသွင်းရတာ ပိုချောမွေ့လာသည်..။ သင်းသင်းမှာ စောက်ခေါင်းနံရံများ အပြည့် လီးတန်ကြီးက ပွတ်တိုက်နေသဖြင့် အရသာ ကောင်းကောင်းခံစားနေရပြီ ဖြစ်သည်..။
တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတော့ သားအိမ်ဝကို လီးထိပ်က လာလာထိသဖြင့် နာသော်လည်း နာကောင်းကြီး ဖြစ်နေပါသည်..။ ဦးအုန်းကျော်၏ လက်နှစ်ဖက်မှာ သူမ၏ ဘေးတွင် ထောက်ထားမှန်း သိသဖြင့် သူမလက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်ထားလိုက်မိသည်..။ လီးတန်ကြီး ပိုဝင်နိုင်အောင်လည်း ဖင်ဆုံကြီးကို မြှောက်ကာ ပင့်ကာဖြင့် ကော့ခံပေးလိုက်သည်..။
ဦးအုန်းကျော်က လီးတန်ကြီး အဆုံးဆောင့်ချလိုက်ရာ သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ထဲ လီးကြီး အဆုံးထိ ဝင်သွားချိန်တွင် စောက်ပတ်ပြင်တစ်ခုလုံးနှင့် ဦးအုန်းကျော်၏ လီးအရင်း ဆီးခုံတို့ ရိုက်ခတ်ဖိမိသဖြင့် အရသာ ပိုရှိလာရသည်..။ ဂွေးဥကြီးနှစ်လုံးကလည်း ဖင်ဝကို လွှဲပြီးရိုက်ပေးလိုက်သဖြင့်လည်း အရသာဆန်း တစ်မျိုးကို ခံစားနေရပြန်သည်..။
“ သမီး…ကောင်းရဲ့လား ဟင်….”
“ အဖေကလဲ…နော်……ဘာတွေ မေးမှန်း မသိဘူး…..”
“ အော်….သမီးရယ်…အဖေလဲ သမီး စောက်ပတ်လေးကို လိုးရတာ ကောင်းလို့ သမီးလဲ ကောင်းလားလို့ မေးတာပါ….”
ဦးအုန်းကျော်မှာ သင်းသင်း ခံကောင်းလာပြီး ဖင်ကြီးကော့ကော့ပေးလာသဖြင့် သင်းသင်း၏ နို့အုံကြီးများကို လက်ဖြင့် လှမ်းဆွဲကိုင်လိုက်သည်…။ အမှောင်ထဲမှာ လှမ်းဆွဲရခြင်းမို့ လက်တွေက နို့အုံကြီးကို မိမိရရ မဆုတ်ကိုင်မိလိုက်ချေ..။ သင်းသင်းက ဦးအုန်းကျော်၏ လက်ကို ဆွဲကိုင်လျက် သူမနို့အုံတွေကို မိမိရရ အုပ်ကိုင်မိစေရန် နေရာချပေးလိုက်သည်..။
သည်တော့မှ ဦးအုန်းကျော်က နို့အုံကြီးများ အခြေမှ နေ၍ ဆွဲကိုင်လျက် ဖင်ကို မြှောက်ကာ လီးတန်ကြီးကို သင်းသင်းစောက်ပတ်ထဲသို့ တအားလိုးဆောင့်ပါတော့သည်..။ သင်းသင်းမှာလည်း ဤသို့တအားဆောင့်လိုးမှုအတွက် ခံကောင်းလာရပြီ ဖြစ်သည်..။ ဦးအုန်းကျော် အလိုးအဆောင့်နှင့် အံဝင်ကိုက်ညီအောင် တင်ပါးကြီးများကို ကော့၍တစ်မျိုး ၊ ဘေးစောင်း ၍ တစ်မျိုး ၊ ဝေ့ဝိုက်၍ တစ်ဖုံ တင်ပါးကို အမျိုးမျိုး လုပ်၍ ကော့ပင် ကားမြှောက်ပေးသည်..။
လီးတန်ကြီး အဝင်အထွက်က တိုးတိုက်မိနေသလောက် စောက်ပတ်ထဲမှာ ကျင်ဆိမ့်လာပြီ ဖြစ်သည်..။
“ အား….ဆောင့်…ဆောင့် ပါ…အဖေ…တအားဆောင့်…သမီး…ကောင်း….ကောင်းနေပြီ…တအားကို ကောင်းနေပြီ…အဖေရဲ့…ဆောင့်ပါတော့…..”
“ အား…..ဆောင့်…..ပြီး…..သမီး…..ပြီး…ပြီ…အဖေ……အိ…အီး…ကောင်း …ကောင်းလိုက်တာ….အင်း…..အင့်…..” ဦးအုန်းကျော်မှာလည်း သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ကို သဘောရှိ ဆောင့်နိုင်ပြီ ဖြစ်၍ အားရပါးရပင် ကြုံးဆောင့်ပစ်တော့သည်..။ စောက်ပတ်ထဲ အဝင်အထွက်မြန်နေသော လီးတန်ကြီးမှာ တဖြေးဖြေးနှင့် ဆိမ့်ကျင်လာပြီး …သုတ်ရေတွေ ထွက်ချင်လာနေချိန်မှာ သင်းသင်းက တအားဆောင့်ခိုင်းရင်း ပြီးသွားတာ သိလိုက်ရတော့ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ…ဆယ်ချက်ခန့် တအားသွန် ဆောင့်ပစ်လိုက်ရင်း သုတ်ရေများကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါတော့သည်..။
သင်းသင်းမှာလည်း ပြီးနေတုန်းမှာ ဦးအုန်းကျော် လီးတန်ကြီးမှ သုတ်ရေများ ပန်းထုတ်ခြင်း ခံလိုက်ရသဖြင့် စောက်ပတ်ထဲတွင် နွေးခနဲ နွေးခနဲ ဖြစ်သွားကာ ဖော်မပြတတ်အောင်ပင် အရသာတွေ့သွားရတော့သည်..။ ထို့ကြောင့် သူမ၏ တင်ပါးကြီးကို အထက်သို့ ကော့ပင့်ကပ်ထားရင်း ပေါင်များဖြင့် ဦးအုန်းကျော် ခါးကို ခွကာ လိမ်ညှစ်ထားလိုက်ပါတော့သည်..။
ခဏကြာမှ ပင့်မြှောက်ထားသော တင်ပါးကြီးများကို ကုတင်ပေါ်သို့ ပစ်ကျသွားပါသည်..။ ဦးအုန်းကျော်မှာလည်း သုတ်ရေများ ထွက်သွားပေမယ့် တစ်ချက်နှစ်ချက် ဆက်ဆောင့်လိုးပြီး လီးတန်ကြီးကို သင်းသင်း၏ စောက်ပတ်ထဲ အဆုံးထိ ထိုးကပ်ဖိသွင်းထားလိုက်ပါသည်..။ သင်းသင်းအပေါ် မှောက်ချလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်ယူနမ်းလိုက်ပါသည်..။ သင်းသင်းကလည်း ဦးအုန်းကျော်၏ ကျောပြင်ကို ပြန်လည် ဖက်ထားလိုက်သည်..။
“ သမီး…..ကောင်းရဲ့လားဟင်….. ”
“ သမီး စောက်ပတ်ကိုတော့ အဖေ စွဲသွားပြီ သိလား…”
“ တော်ပါပြီ…အဖေရယ်…မစွဲပါနဲ့…အမေသိရင်…အားလုံး စိတ်ဆင်းရဲကုန်ရမှာ…သွားပါတော့နော်…”
ဦးအုန်းကျော်က သင်းသင်းကိုယ်ပေါ်မှ ထပြီး စောက်ပတ်ထဲ တဆုံးဝင်နေသော လီးတန်ကြီးကို ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်..။ ပြီးမှ ပုဆိုးကို ရှာဖွေကာ ပြန်ဝတ်လိုက်ပြီး အခန်းထဲမှ တိတ်ဆိတ်စွာ ပြန်ထွက်ခဲ့လိုက်ပါသည်..။
လီးနှင့် စောက်ပတ်တပ်၍ လိုးခြင်းဖြင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော အရသာကို ခံစားရကြောင်း သိရှိပြီးဖြစ်သဖြင့် ဦးအုန်းကျော်၏ လီးတန်ကြီးဖြင့် ထပ်မံ၍ အလိုးခံချင်မိသော်လည်း အမေဖြစ်သူ ဒေါ်ပိန်သေး သိသွားပါက ပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကာ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်း ဖြစ်သွားလျင် အားလုံး စိတ်ဆင်းရဲရပြီး သူမ၏ ဆရာမ ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း ထိခိုက်လာနိုင်သဖြင့် သူမ၏ ရမ္မက်ဆန္ဒတွေကို အောင့်အီး မြိုသိပ်ကာ ထိန်းချုပ်ထားလိုက်ရပါတော့သည်..။
ဒါကြောင့်လည်း ဦးအုန်းကျော်နှင့် စောစီးစွာ ဇာတ်လမ်းဖြတ်ရန် စဉ်းစားပြီးဖြစ်၍ ဦးအုန်းကျော်ကို ပြန်ခိုင်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်..။ အမှန်မှာ သင်းသင်း ဦးအုန်းကျော်၏ အလိုးမှာ နစ်မျောမိသလို ဦးအုန်းကျော်၏ လီးကြီးကိုလည်း တပ်မက်စွဲလမ်းမိခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်..။ သို့သော် ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်မှန်း သိ၍ ထပ်မံ အလိုးခံဖို့ မစတော့ပဲ ဦးအုန်းကျော်ကို နှင်လိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်..။ မနက်ဖြန်ဆိုလျင် အလုပ်ရှိရာသို့ ပြန်ရမည်ဖြစ်၍ ဦးအုန်းကျော်နှင့် ဇာတ်လမ်းကို ပေမရှည်ချင်တော့…။
သူမရင်ထဲမှာတော့ ဦးအုန်းကျော် ပေးသော ၊ ဦးအုန်းကျော် စခဲ့သော ၊ လက်တွေ့ပြခဲ့သော ကာမအရသာ ခံစားနှစ်ခြိုက်မိကာ ၊ ကာမဆန္ဒ ကာမမီးတောက်တွေ တဟုန်းဟုန်း တောက်လောင် ထကြွနေခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်..။
Posted by bluegyi at 06:40